Falcelinta Kiimikada Miisaanka leh | C3H6Br2 (Propylene bromide; 1,2-Dibromopropane; Propylene dibromide) Sida Walaxda Alaabta
Falcelinta Kiimikada ayaa leh C3H6Br2 (Propylene bromide; 1,2-Dibromopropane; Propylene dibromide) Sida Walaxda Alaabta
Isla'egyada kiimikaad ee isku dheeli tiran ee alaabta ka kooban C3H6Br2
10ka falcelin kiimikaad ee ugu sarreeya (isla'egaanta dheellitiran) ee leh C3H6Br2 sida walaxda wax soo saarka, oo lagu qiimeeyay mugga raadinta
Br2 + C3H6 . C3H6Br2
10ka sare ee isku dheeli tiran ee falcelinta kiimikada ee leh C3H6Br2 sida walaxda alaabta
Ma aynaan helin wax isle'eg kiimikaad ah oo loo kala saaray falcelinta isku-dhafka ah sidoo kale waxay leedahay C3H6Br2 (Propylene bromide; 1,2-Dibromopropane; Propylene dibromide) sida walxaha wax soo saarka.
10ka sare ee falcelinta Burburinta kiimikaad isku dheeli tiran oo leh C3H6Br2 sida walaxda alaabta
Ma aynaan helin wax isle'eg kiimikaad ah oo loo kala saaray falcelinta Burburka iyo sidoo kale waxay leedahay C3H6Br2 (Propylene bromide; 1,2-Dibromopropane; Propylene dibromide) sida walaxda alaabta.
10ka sare ee kiimikaad isku dheeli tiran ee falcelinta Oxidation-yaraynta ee leh C3H6Br2 sida walaxda alaabta
Ma aynaan helin wax isle'eg kiimikaad ah oo loo kala saaray falcelinta-yaraynta Oxidation-ka iyo sidoo kale waxay leedahay C3H6Br2 (Propylene bromide; 1,2-Dibromopropane; Propylene dibromide) sida walaxda wax soo saarka.
10ka sare ee kiimikaad isku dheeli tiran ee falcelinta hal beddelka ah ee leh C3H6Br2 sida walaxda alaabta
Ma aynaan helin wax isle'eg kiimikaad ah oo loo kala saaray falcelin hal-bedel ah oo sidoo kale leh C3H6Br2 (Propylene bromide; 1,2-Dibromopropane; Propylene dibromide) sida walxaha alaabta.
10ka sare ee isku dheeli tiran ee kiimiko ah falcelinta laba-badal ee leh C3H6Br2 sida walaxda alaabta
Ma aanan helin wax isle'eg kiimikaad ah oo loo kala saaray falcelin laba-badal ah oo sidoo kale leh C3H6Br2 (Propylene bromide; 1,2-Dibromopropane; Propylene dibromide) sida walxaha alaabta.